३१ प्रतिशत एचआइभी संक्रमित उपचारको पहुँचबाहिर, प्रत्येक दिन दुईजना संक्रमित थपिँदै
२०७८ मङ्सिर १९ आइतबार १०:०७:००
सरकारले सन् २०३० सम्ममा एचआइभी/एड्स महामारीलाई अन्त्य गर्ने अर्थात् शून्य नयाँ एचआइभी संक्रमण, शून्य एड्स सम्बन्धित मृत्यु र शून्य एचआइभी सम्बन्धित भेदभावको लक्ष्य लिएको छ । साथै सन् २०३० सम्म ९५–९५–९५ को लक्ष्य (९५ प्रतिशत एचआइभी संक्रमितले आफ्नो संक्रमण अवस्थाबारे थाहा पाउने, तीमध्ये ९५ प्रतिशतको औषधि उपचारमा पहुँच हुने र औषधि खानेहरूमध्ये ९५ प्रतिशतको शरीरमा भाइरसको भार न्यून बनाउने)समेत लिएको छ ।
तर, नेपालमा रहेका कुल संक्रमितको ३१ प्रतिशत अर्थात् नौ हजार चार सय १७ जना एचआइभी संक्रमित अझैसम्म पनि उपचारको पहुँचबाहिर छन् । विश्व एड्स रोकथाम दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार हाल देशभर ३० हजार तीन सयजना सक्रिय संक्रमित छन् । जसमध्ये १६ हजार तीन सय १४ जना पुरुष र १३ हजार नौ सय ८६ महिला छन् । यस्तै, एक हजार दुई सय ६८ बालबालिकासमेत एचआइभीबाट संक्रमित बनेका छन् ।
एक वर्षमा थपिए सात सय ५४ संक्रमित
केन्द्रले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार एचआइभी संक्रमित पहिचान दर बढ्दै गएको छ । सन् २०२० मा मात्रै सात सय ५४ जना संक्रमित थपिएको केन्द्रले जनाएको छ । अर्थात्, प्रतिदिन थप दुईजनामा एचआइभी एड्स संक्रमण देखिने गर्छ । यो वर्ष चार सय ७२ जना पुरुष र दुई सय ८२ जना महिलामा संक्रमण देखिएको थियो ।
चिकित्सकहरूका अनुसार एचआइभी संक्रमणको पूर्ण उपचार सम्भव छैन । यसकारण समयमै संक्रमण पहिचान र स्वस्थ जीवनशैली कायम राख्न अति आवश्यक छ । केन्द्रकी निर्देशक सुधा डा. देवकोटा भन्छिन्, ‘तर, उपचारको पहुँचबाहिर रहेका संक्रमितको अवस्था अनविज्ञ छ । यसको अर्थ अन्य व्यक्तिमा पनि संक्रमण फैलिइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । संक्रमितको स्वस्थ जीवन र सहज उपचारका लागि संक्रमण पहिचान हुन उत्तिकै जरुरी छ ।’
यो वर्ष नेपालमा ६ सय ३६ जना एचआइभी संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने गत वर्ष चार सय १२ संक्रमितको मृत्यु भएको तथ्यांक छ । नेपालमा पहिलो एचआइभी संक्रमित केस सन् १९८८ मा पहिचान भएयता ४० हजार तीन सय ४१ जनामा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाको विवरणअनुसार हाल २५ हजार दुई सय १४ जना उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्था पुग्ने गरेका छन् ।
‘यौन व्यवसायी’का ग्राहक सबैभन्दा धेरै संक्रमित
राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार कारण नखुलेकाबाहेक सबैभन्दा बढी एचआइभी संक्रमित यौन व्यवसायीका ‘ग्राहक’हरू छन् । १५ जुलाई २०२१ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल एचआइभी संक्रमितमध्ये ३०.५ प्रतिशत कारण नखुलेका छन् भने ३०.५ प्रतिशत नै यौन व्यवसायीहरूबाट संक्रमित भएको खुलाएका छन् ।
विभागको एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन शाखाका अनुसार हालसम्म उपचारको पहुँचमा रहेका संक्रमितको संख्याका आधारमा संक्रमणको मुख्य कारण यौन व्यवसायीहरूसँगको सम्बन्ध भएको खुलाइको छ । तथ्यांकअनुसार हालसम्म देखिएका कुल संक्रमितमध्ये १२ हजार तीन सय १९ जना यौन व्यवसायीका ग्राहक थिए । जसमध्ये १२ हजार ९३ पुरुष, दुई सय १९ महिला र सातजना क्वेयर समुदायका रहेको तथ्यांक छ ।
यसबाहेक विदेशिएका कामदारहरूमा पनि एचआइभी संक्रमणदर उच्च देखिन्छ । कुल संक्रमितको ११.३ प्रतिशत कामका लागि बिदेसिनेहरू छन् । विवरणअनुसार चार हजार एक सय ९९ पुरुष, तीन सय ७४ महिला र तीनजना क्वेयर छन् ।
गर्भवतीमा एचआइभी उन्मूलन चुनौतीपूर्ण
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सन् २०२६ सम्ममा आमाबाट बच्चामा हुने एचआइभी संक्रमण उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०२१ को जुलाईसम्म नेपालमा २० हजार आठ सय ८३ संक्रमितले एन्टी रेट्रो भाइरल (एआरभी) उपचार लिइरहेका छन्, जुन कुल संक्रमितको ६९ प्रतिशत हो ।
यस्तै सक्रिय संक्रमितको ४ प्रतिशत अर्थात् एक हजार दुई सय ६८ बालबालिका र दुई सय १६ गर्भवती रहेका छन् । सरकारले यस वर्ष ९० प्रतिशत गर्भवती महिलालाई उपचारको पहुँचमा ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, हालसम्म ७३ प्रतिशत गर्भवतीले एचआइभीविरुद्धको एन्टी रेट्रो भाइरल उपचार पाएका छन् । तर, हरेकजसो परीक्षणमा एचआइभी परीक्षण अनिवार्य गरिएकोले सरकारको लक्ष्यनजिक पुग्ने आशा रहेको बताउँछन् भेरी अस्पतालका एचआइभी फोकल पर्सन डा. संकेत रिसाल ।
उनी भन्छन्, ‘गर्भवतीमा अनिवार्य एचआइभी परीक्षण गरिएको छ । महामारीमा उपचारबाट वञ्चित हुन नदिन घरमै औषधिसमेत पुर्‍याइएको छ । संक्रमित पहिचानका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेकाले सरकारको लक्ष्यनजिक पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।’
एचआइभी संक्रमितलाई घरमै औषधि
समाजमा खुल्न थाले एचआइभी संक्रमित
एचआइभीले रित्तिएको एउटा घर
सप्तरीमा एचआइभी एड्सबाट एकै परिवारका तेस्रो व्यक्तिको मृत्यु